कसको योजनामा भयो प्रहरी बलको मुख्यालय भित्र मध्यरातमा आगलागी ? - समसामायिक | Kantipur TV HD
कसको योजनामा भयो प्रहरी बलको मुख्यालय भित्र मध्यरातमा आगलागी ?
एक महिना अघि सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय भित्र मध्यरातमा भएको आगलागी सामान्य थिएन । योजनावद्ध रुपमा भएको आगलागी प्रमाण नष्ट गर्नकै लागि भएको गृहमन्त्रालयको छानविनि समतिको निष्कर्ष छ ।
सहसचिवको संयोजकत्वमा गृह समन्त्रालयले बनाएको छानविन समितिले आर्थिक प्रशासनमा आर्थिक हिसाब किताब सम्बन्धी कागजपत्र नष्ट पार्न कै लागि योजनावद्ध रुपमा आगो लगाएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । गृहमन्त्रालयले आर्थिक प्रशासन महाशाखामा कार्यरत सबैलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेर कार्वाही गर्न सशस्त्र मुख्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । जलाइएका कागजपत्र के थियो सशस्त्रले अझै खुलाएको छैन । भ्रष्टाचारको मुद्धा खेपिरहेका चार पूर्व आइजीपी सहितका अधिकृतहरुको फाइल जलाइएको हुन सक्ने भन्दै गृहले अख्यिारलाई पनि पत्राचार गरेको छ ।
आर्थिक प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका एसएसपी अभि खत्री सहित अन्य दुइ डीएसपी समेत शंकास्पद देखिएका छन् । तर उनीहरुलाई आइजीपी शैलेन्द्र श्रेष्ठको निकट देखिएकाले जिम्मेवारीबाट मुक्त नगरिएको श्रोतको दावी छ । घटना आपराधीक भएकाले फैजदारी मुद्धा अन्तरगत अनुसन्धान ब्युरोलाई सीआइबीलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
घट्नापछि गृहमन्त्रालय र सशस्त्र मुख्यालयले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर छानविन गरेको थियो । सशस्त्रको आन्तरिक समितिले अंझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।